ILoch Ness: izici, imifudlana, izimbali, izilwane nezinganekwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela wake wezwa ngenganekwane yesilo esikhulu se- IChibi Ness. Lolu hlangothi lube yisisulu sezinganekwane eziningi zokuba khona kwezilo ezenze ukuthi iScotland ivakashelwe kuphela ukuze kuqinisekiswe ukuba khona kwalesilo. Kungumzimba wamanzi amasha asezindaweni eziphakeme zaseScotland.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana noLoch Ness.
2 Izintela ezinkulu
3 Izitshalo nezilwane zaseLoch Ness
4 Inganekwane yeLoch Ness Monster
Leli chibi lizungezwe amadolobha angasogwini iFort Augustus, Invermoriston, Drumnadrochit, Abriachan, Lochend, Whitebridge, Foyers, Inverfarigaig neDores. Kuvakashelwe kaningi selokhu kwasabalala amahlebezi okuthi kunesilo sakhona kuleli chibi. Inesimo esithile uma iqhathaniswa namanye amachibi njengoba inkulu impela futhi izacile. Ukujula kwayo okuphezulu kungamamitha ayi-240, okwenza libe ibhomu lesibili elijulile kulo lonke elaseScotland.
Ubude bayo bungamakhilomitha angama-37. Lezi zilinganiso zenza kube lula ukuthola umthamo wamanzi omkhulu kunayo yonke iGreat Britain. Ubuso bungamamitha ayi-16 ngaphezu kogu lolwandle futhi bubekwe eceleni kwephutha leGreat Glen. Kunemininingwane eminingi yokwakheka komhlaba esho lokho Leli phutha lineminyaka eyizigidi ezingama-700 ubudala. Ngenxa yokuthi leli phutha likhona ngaphesheya kwechibi, kusukela ngo-1768 kuya ku-1906 kwaba nokuzamazama komhlaba okungu-56 eduze kwephutha. Lokhu kuyenza ibe ngelinye lamachibi, umsebenzi wokuzamazama komhlaba kuyo yonke iplanethi.
Umsuka weLoch Ness uhlehlela emuva eminyakeni ecishe ibe ngu-10.000 XNUMX edlule. Kulinganiselwa ukuthi yakhiwa ekupheleni kweminyaka yokugcina yeqhwa ngesikhathi se- Holocene. Izinga lokushisa eliphakathi nendawo likhona ngo-5.5 degrees centigrade. Esinye sezici ezimangazayo zaleli chibi ukuthi alikaze libe neqhwa. Ngaphandle kobusika obubanda kakhulu eScotland obunamakhaza ashubisa umnkantsha, uthando alukaze lube yiqhwa.
Ukuze ikwazi ukwamukela leli nani lamanzi, idinga ukuba nemifula eyanele yomfula. Le mifula yilena: iGlen Moriston, iTarff River, iFoyers River, iFarigaig River, i-Enrick River, neCoiltie River, kanye nomfula waseCaledonian Canal.
Uma sihlaziya ingqikithi yebheseni siyabona ukuthi liyamboza indawo engamakhilomitha-skwele ayi-1.800 futhi ixhunywe kwiLake Oich. Ngasohlangothini olusempumalanga ixhuma nolunye uhlangothi olubizwa ngeDochfour, olugcina luphumele eMfuleni iNess ogeleza ube izinhlaka ezimbili: iBeauly Fjord neMoray Fjord. Kulabo abangazi, i-fjord ayilutho ngaphandle kokungena okude futhi okubonakalayo okukhiqizwa ngokuncibilika kweqhwa. Ezinhlangothini ze-fjord esetshenzisiwe ungabonisa amawa akhiwa ngenxa yesigodi esingaphansi kwamanzi.
Iqiniso elingaziwa ngabantu abaningi yilokho Ngaphakathi kweLoch Ness kunesiqhingi esincane esenziwe ngabantu esibizwa ngeCherry Island. Akunamuntu owaziyo ngalesi siqhingi esakhiwa ngesikhathi se-Iron Age. Lesi siqhingi esincane kakhulu simi cishe ngamamitha ayi-150 ukusuka ogwini oluseningizimu futhi ekuqaleni sasinkulu. Kodwa-ke, eminyakeni edlule ukukhuphuka kwezinga lamachibi kwenze lesi siqhingi sangatholakali kangako. ICaledonian Canal iyimbangela yokwenyuka kwezinga lamachibi. Lo mzila ungowokwakha okwenziwe okwaqedwa ngo-1822. Eminyakeni edlule, usuphenduke umzila wamanzi okuhamba kuwo onobude obungamakhilomitha angama-97 ukusuka enyakatho-mpumalanga kuya lapho uya khona.
Ngaphezu kwalokho, lokho ngaphakathi kweLoch Ness sithola amanxiwa e-Urquhart Castle. Le nqaba inosuku lokuthi Iqala ngekhulu le-13 kuya kwele-16 futhi inikeza izinkambo eziqondiswayo kubavakashi bayo.
Izitshalo nezilwane zaseLoch Ness
Ngaphambi kokukhuluma ngesilo, sizokhuluma ngezitshalo nezilwane okufakazelwa ukuthi zikhona. Leli chibi ligqame ngokuba nezimbali ezincane kakhulu emanzini alo ngenxa yokwenyuka nokuwa kwamazinga wamanzi. Ukujula impela ngamamitha ambalwa ukusuka ogwini futhi ukuba nezilwane ezincane ngaphakathi yikho okwenza kube mpofu impela.
Yize ukuhlukahluka kwayo kungathandeki kangako, singathola izinhlobo ezinjenge-eel yaseYurophu, i-pike yaseYurophu, i-sturgeon ejwayelekile, izinhlobo ezahlukahlukene zesalmon, izibani zezibane nezinye izinhlobo.
Esingakuqhakambisa ngaphandle kokuhlukahluka kwayo okuncane kwezinhlobonhlobo ukuthi amanzi aleli chibi awacaci nhlobo futhi abonakale. Ngokuphambene nalokho, inokubonakala okuphansi kakhulu ngenxa yokuthi inhlabathi yayo inokuqukethwe okuphezulu kwe-peat nakho konke okuzungezile. Le peat inekhabhoni eningi futhi yilokho abantu abathi kufihla isilo esikhulu seLoch Ness.
Inganekwane yeLoch Ness Monster
Futhi ukuthi inganekwane yesilo saseLoch Ness iye yagcinwa isizukulwane ngesizukulwane. Inganekwane ithi kunesidalwa sasolwandle esinosayizi omkhulu nentamo ende esala ngokungaqondakali emanzini nokuthi bambalwa kakhulu abantu abakwazile ukuyibuka njengoba ivela ngezikhathi ezithile kuphela. Okucatshangwayo ukuthi lesi silo esikhulu sicashe ngaphansi kwenqwaba yempezi ekhona ezansi kwechibi.
Ukungakwazi ukuxhumana ngqo nezinhlobo ezithile akwaziwa ukuthi inobutha yini noma ukuthi ingakwazi yini ukulimaza umuntu. Akukho okwaziwayo ngokuziphatha kwabo, ukondla, usayizi weqiniso nanoma yiziphi ezinye izici zomzimba. Lokhu okungaziwa kudala ukuthi inani elikhulu labantu livakashele echibini eminyakeni edlule, nanamuhla.
Izici ezaziwayo kuphela zalesi silo umbala wayo oluhlaza kanye nentamo futhi nalokho okude kakhulu. Baningi abayiqhathanisa ne-brachiosaurus kepha enobukhulu bomzimba obuncane, kusobala. Ukuba khona kwalesi silo noma cha kuzobonakala ngokuhamba kwesikhathi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeLoch Ness.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » IChibi Ness